“Lewandowski Wuu Ka Fiicanyahay Messi iyo Ronaldo” – Rummenigge – Garsoore Sports
“Lewandowski Wuu Ka…
Weeraryahanka Bayern Munich Robert Lewandowski ayaa caddeeyay inuu ka fiicanyahay Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi, sida laga soo xigtay Karl-Heinz Rummenigge oo ah guddoomiyaha kooxda Bayern Munich.
Xiddiga reer Poland ayaa dhigi kara rikoorka Bundesliga haddii uu dhaliyo goolkiisii 41aad ee xilli ciyaareedka maanta.
Lewandowski ayaa ku riyaaqay xilli ciyaareed kale oo qurux badan oo uu la qaatay kooxdiisa, isagoo dhaliyay 40 gool 28 kulan oo Bundesliga ah xilli ciyaareedkan iyadoo Bayern ay qaadday horyaakoodii 9aad oo xiriir ah.
Waxa uu sidoo kale shabaqa soo taabtay shan jeer lix kulan oo Champions League ah kahor inta aysan kooxdiisa ka ciribtirmin wareega quarter-finalka ee tartanka oo ay Paris Saint-Germain ka reebtay- iyadoo xiddigan uu markaas dhaawac ku maqnaa.
Muxuu yiri Rummenigge?
Guddoomiyaha kooxda Bayern Munich ayaa ku qanacsan in weeraryahan Lewandowski uu yahay midka ugu fiican dunida iyadoo ay joogaan xiddiga Juventus Ronaldo iyo halyeeyga Barcelona ee Messi.
Wuxuu u sheegay Wirtualna Polska: “isagu wuxuu helay abaalmarinta FIFA ee ciyaaryahanka ugu fiican adduunka, marka aniga ahaan kiisku wuu cad yahay.
“Waayahay, hibbooyin waa weyn ayaa kasoo muuqday kubbada-cagta adduunka, sida Kylian Mbappe. Sikastaba, Robert Lewandowski ayaa hadda ah cayaaryahanka ugu fiican adduunka.
“Fikradayda, wuxuu haatan ka fiican yahay Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi”.